Ahoana ny fomba famoronana rakotra boky an-tserasera: safidy hanandrana | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba famoronana rakotra boky amin'ny Internet
Encarni Arcoya | 03/09/2021 13:00 | maro
Mihevitra izany ve ianao amin'ny mamorona rakotra boky ilaina ve ny manana programa fanovana sary? Eny, ny marina dia tsia. Amin'ny Internet dia azonao atao ny mahita fitaovana isan-karazany hanamboarana rakotra boky an-tserasera ary hahazo valiny mitovy amin'izany raha toa ka nanao programa tamina solosaina ianao.
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ireo fitaovana ireo? Efa liana te hahafantatra ny fomba fanaovana rakotra boky an-tserasera ve ianao ary tsy miankina amin'ny programa napetraka ao amin'ny solosainao? Tandremo, manolotra ireo tsara indrindra eto ambany izahay.
1 Nahoana no tena zava-dehibe ny firakofana?
2 Izay tsy maintsy raisinao mba hamoronana fonony
3 Tranonkala hanaovana rakotra boky an-tserasera
3.3 Desygner, mamorona rakotra boky ara-batana sy nomerika
Nahoana no tena zava-dehibe ny firakofana?
Ny rakotra boky dia azo isaina ho ny fiheverana voalohany ananan'ny boky. Matetika mankany amin'ny fivarotam-boky isika, raha tsy mitondra anaram-boninahitra na mpanoratra ao an-tsaina, dia avelantsika hoentin'ny talantalana isika ary ireo izay misarika ny saintsika ihany no mahatonga antsika hijanona sy haka ilay boky hamadika azy io ary fantaro izay. ny tantara mandeha.
Azontsika lazaina izany ny fonony no hahasarika ny sain'ny mpamaky, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fanaovana tsara. Ary amin'ny tsara dia hoe:
Izany dia mandeha araka ny tantara notantaraina.
Miorina tsara izy io, tsy be loatra ary tsy toy ny globe.
Ny sary dia manana kalitao tsara mba tsy hivoahana manjavozavo na pixelated.
Raha ny marina, ao amin'ny fivarotam-boky, fivarotana lehibe, hetsika sns. io no fonony hahataitra ny olona hahatsikaritra ilay boky, ary io no zava-dehibe indrindra amin'ny mpanoratra. Indrindra rehefa tsy mbola fantatra loatra. Izany no antony tsy maintsy handinihanao ny antsipiriany amin'ny rakotra boky, satria miankina amin'izy ireo ny valiny.
Izay tsy maintsy raisinao mba hamoronana fonony
Betsaka ny rakotra boky. Ary hisy olona an-tapitrisany maro hafa koa ho tonga. Na dia tsy miroborobo aza ny tsenan'ny literatiora, farafaharatsiny any Espana, tsy midika izany fa boky an-tapitrisany no navoaka manerana an'izao tontolo izao ary any amin'ny firenena maro dia boky ny andiany isan'andro (ohatra, misy firenena izay manome boky, na mandany ny Taom-baovao mamaky boky dia fanao iray).
Izy rehetra dia samy nanana singa iraisana, toy ny fisehon'ny lohatenin'ilay boky, ny anaran'ny mpanoratra na ny marika famoahana (na ny fanontana amin'ny birao). Ny ambiny amin'ny antsipiriany, toy ny firafitra, sary, sns. izay ampiasaina hanehoana ny fonony dia ho lasa namboarina manokana izy, na dia fantatsika aza fa misy fonony izay tena mitovy (raha tsy mitovy).
Izany dia vokatry ny banky sary, na maimaim-poana izany, na rehefa voaloa, fa rehefa manolotra sary amidy na misintona dia afaka mampiasa azy ireo na iza na iza nefa tsy ampandrenesina fa nampiasaina teo amin'ny fonony boky (tokony ho hitanao amin'ny fikarohana ny sary). Misy fitaovana sasantsasany izay afaka manampy anao hahafantatra raha io sary io dia nampiasaina tamin'ny boky, na tamin'ny tranokala, ka hamaritana raha mbola te hiasa amin'ny bokinao ianao na misafidy hafa.
rehetra ny sary ampiasaina amin'ny fonony dia tsy maintsy misy kalitao tsara. Tsy tsara ny mampiasa sary kely, na misy piksel vitsivitsy, satria ny hany zavatra ho tratrarinao dia, rehefa manonta azy dia manjary pixelated, toa manjavozavo na toa tsy nitandrina ny fonony ianao. Ary raha dinihina fa izany ny fahatsapana voalohany azonao amin'ny mpamaky, azonao atao ny mieritreritra azy ireo fa raha tsy nitandrina zavatra manan-danja toy ny fahitan'ilay boky ianao dia tsy ho mendrika izany ny tantara.
Vantany vao vitainao izany rehetra izany dia tonga ny fotoana hanangonana ireo rakotra boky. Saingy, raha tokony hiankina amin'ny programa amin'ny solosainao izahay dia hanome fitaovana an-tserasera anao izahay hahafahanao manao izany amin'ny alàlan'ny Internet.
Tranonkala hanaovana rakotra boky an-tserasera
Manaraka izany dia handao anao safidy an-tserasera maro izahay hamoronana rakotra boky. Izy rehetra dia hamela anao, ao anatin'ny minitra vitsy, hahatratra ny rakotrao tsara hanombohana ny tenanao amin'ny famoahana ny bokinao.
Ny fitaovana voalohany omenay anao dia ny Adobe Spark. Izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra, satria tsy mila mahafantatra famolavolana ianao. Izany dia modely isan-karazany hanombohana anao amin'ny asa vita, na ataovy avy hatrany.
Ny tsara indrindra dia ny hoe, na dia mety tsy mino izany aza ianao satria avy amin'ny Adobe, dia fitaovana maimaimpoana ary mora be ny miasa. Ho an'ireo vao manomboka dia mety ho lavorary, indrindra amin'ny môdely, fa na ny famoronana azy amin'ny rangotra aza dia mora (raha ny tena izy, amin'ny ankapobeny, ny fanaovana fonony dia tsotra raha tsy mila mamerina ilay sary ianao).
Flipsnack dia fitaovana karamaina, fa ny tena izy dia manana ampahany maimaimpoana izay ahafahan'izy ireo mamorona endrika vitsivitsy ary mety ho fonosam-boky ireo. Mazava ho azy, mitandrema satria voafetra izy ireo ary koa, raha te hamolavola ny maodelinao ianao dia tsy avelany.
Ankoatra izany, azo inoana fa miseho miaraka amina mari-drano izy ireo, zavatra izay tsy atolotra ho anao. Fa satria fitaovana matanjaka be ianao dia afaka mandinika ny vidiny, indrindra raha manarona maromaro isam-bolana ianao.
Tsy dia samy hafa be amin'ilay teo aloha izy io, mamela anao hamorona ny volavolanao manokana ianao, na mampiasa ny modely misy anao mba hamboarina azy ireo ary hamitana azy eo aloha.
Desygner, mamorona rakotra boky ara-batana sy nomerika
Ity fitaovana an-tserasera ity dia, araka ny voalaza ao amin'ny pejiny, maimaim-poana. Miaraka aminy ianao dia afaka mamorona rakotra boky ara-batana, fa ny zava-baovao ampitahaina amin'ny hafa dia izy ihany koa afaka manamboatra fonosana ho an'ny Kindle sy Wattpad ianao.
Ny zavatra tokana dia tsy maintsy hisoratra anarana ianao, fa ho takalonao dia manana katalaogila modely misimisy ihany koa izay manome aingam-panahy hahatratra ny fononao.
Canva dia tsy isalasalana fa fitaovana iray izay manamboatra ny fomba tiany indrindra ho an'ny mpamorona sy ny tsy mpanao endrika. Miaraka aminy ianao dia afaka mamorona famoronana sary marobe, ary, mazava ho azy, iray amin'izany ny rakotra boky.
Amin'ity tranga ity dia efa namboatra takelaka voafaritra mialoha ianao, saingy azonao atao ihany koa ny manao azy amin'ny rangotra. Mazava ho azy, ny modely tsara tarehy kokoa no aloa, fa ny vidiny dia tsy avo araka ny noeritreretinao sao sendra ianao raiki-pitia amin'ireo.
Ity fitaovana ity raha ny marina dia programa fanovana sary an-tserasera. Saingy mamporisika azy izahay satria, amin'ity fomba ity, tsy vitan'ny hoe mamorona fonony fotsiny ianao, fa mamerina mamerina koa ilay sary ary azonao apetraka araka izay itiavanao azy.
Afaka manao izany ianao manatsara ny famahana ny sary (Fantatrao, raha ho an'ny boky ara-batana dia tokony ho 300px, ary ho an'ny ebook dia tokony ho 72px), ary koa hamafana ireo lesoka ireo na hanambatra sary maromaro hahazoana valiny matanjaka kokoa.
Ary raha fantatrao ny haben'ny fonony, azonao atao ny manampy ny lahatsoratra ilainao ary ho vitanao izany nefa tsy mila mankany amin'ny tranonkala hafa hamita azy.
Azonao atao ve ny manolotra fomba maro hanamboarana rakotra boky an-tserasera?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba famoronana rakotra boky amin'ny Internet